Na-apụ apụ: Drivegbọ okporo ụzọ na Ntụnye Ọdịnaya | Martech Zone
Tuesday, July 3, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Anyị anwalela ọrụ ole na ole iji gosipụta ihe ndị metụtara ya na ibe ibe anyị na Martech. Ugbu a, anyị na-anwale Ọpụpụ na m nwere ikwu na ọ masịrị m nke ukwuu. Nke a bụ nkọwa nke ọrụ ahụ:
Outbrain nwere nkenke nchịkọta ngwugwu na-enye pịa-site data na ewu ewu nke ọ bụla nke posts rubere site na sistemụ ha. Anyị gbakwunyere ndepụta anyị iji mee ka ọ dị mfe - mana anyị na-ekerịta ọkwa anyị ndị ọzọ na-ewu ewu. N'ihi na ngosi na anyị na saịtị, anyị na-optionally onyinye ọ bụla na-akwụ ụgwọ clicks si anyị blog ọrụ ebere… a nnọọ jụụ nhọrọ na-esoro na Outbrain n'elu ikpo okwu.
Nke a bụ ụbọchị mbụ anyị na-agba ọsọ na-agba ọsọ:
Ọtụtụ ihe, anyị ọdịnaya dị mkpa a na-egosiputa na saiti nke nwere otutu ndi mmadu kariri nke anyi nwere… mana a ga m ekpebi ihe mmefu ego m na-eme kwa ụbọchị yana ego ole m chọrọ iji kwa Pịa. Nke ahụ bụ ebe ahụ dị mma, oge kwesịrị ekwesị, na ọnụahịa ziri ezi. Ana m atụ anya ịhụ ka Outbrain nwere ike isi mee ka ndị gụrụ akwụkwọ ọhụrụ nweta ya Martech Zone!
Arụnyere na n'elu 50,000 saịtị nkwusa saịtị na blọọgụ, Outbrain bụ ihe na-eduga nkwanye ọdịnaya n'elu ikpo okwu na weebụ. A na-etinye ikpo okwu anyị n'okpuru isiokwu dị na saịtị kachasị ndị bipụtara ebe ndị na-agụ akwụkwọ na-achọsi ike ịchọpụta ọdịnaya ọhụrụ. Ndị na - agụ akwụkwọ lere ebe a pụrụ iche anya dị ka ndị a kwadoro n'ụzọ ziri ezi, na-enye anyị ohere ịnye ndị na-ege ntị dị elu nke ndị na-ere ahịa bụ ndị gosipụtara onwe ha dị ka ndị nwere mmasị na ọdịnaya ndị ahịa.
na- free wijetị ịmalite igosipụta ọdịnaya dị mkpa dị n'ime saịtị gị taa.
Tags: content Marketingnkwanye ọdịnayaọdịnaya nkwanye ọdịnayausoro nkwanye ọdịnayaNgwaọrụ nkwanye ọdịnayampụgappcyiri ọdịnaya wijetịWijetị
Jul 10, 2012 na 1:45 PM
Douglas kedu ka m ga-esi denye aha na Blog gị. BTW, ntinye a na Outbrain bịara n'oge yana ihe ọmụma. Daalụ!
Aug 1, 2012 na 8:07 PM
Nnukwu ego maka ndị na-ebipụta ọdịnaya iji nweta ọdịnaya ha na net.
Ọkt 16, 2012 na 1:28 PM